Xagee Ayaad u Malaynaysaan in uu Jwxo-shiil Joogo? – Rasaasa News
Xagee Ayaad u Malaynaysaan in uu Jwxo-shiil Joogo?
Jul 2, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada, Jwxo-shiilo
Bogga rasaas.com, waxaa uu maanta jeclaystay in dadweynaha Somalida Ogadeeniya ay ka soo jawaabaan su,aasha ah xagee ayuu Jwxo-shiil joogaa, waxaanu dadweynaha gaadhsiinaa wararka ku saabsan geeska Afrika, gaar ahaana wararka ku saabsan dadka Somalida Ogadeeniya [Somali people in Ogaden]. Hadaba waxaa jira su,aalo aad u badan oo aanu ka helo qaar ka mid ah dadweynaha boggan akhrista, waxayna had iyo goorba na soo weydiiyaan meesha uu joogo Jwxo-shiil. Ma aha kaliya dadweynaha Somalida Ogadeeniya kuwa su,aashas na soo weydiiya ee waxaa kaloo su,aashaas na soo weydiiyey oo ugu dambeeyey Amb. Divid Shinn oo ah Safiirkii Maraykanka u fadhiyi jiray dalka Itobiya eeggana ah Professor wax ka dhiga Jaamacad ku taal Washington fiiri Blog Divid Shinn.
Hadaba si,aanu jawaab ugu helo su,aasha ay dadweynu na soo weydiiyeen, ayaanu meelo badan war ka raadinay oo ay ka mid yihiin; dalka Kenya, dalalka Khaliijka Carabta gaar ahaan dalka Imaraadka Carabta [UAE], Jwxo-shiilo, Jwxo-shiilada iyo qoyskiisa, waxaana noo suurto gali wayday in ay na siiyaan wax war ah.
Waxanu isku daynay in aanu war ka helo xubno badan oo ka tirsan Jwxo-shiilada, waxayna dhamaantood isku raaceen in ayna wax war ah ka haynin Jwxo-shiil intii ka dambaysay bishii February 2009. Waxaa kale oo ay xubnahaasi noo sheegeen in ayna jirin xidhiidh toos ah u dhaxeeya xubnaha Jwxo-shiilada laftigooda, waayo waxaa kala shaki weyn ku keenay dilkii Dr. Maxamed Siraad Dolaal. waxay iyaga oo aan iska war haynin noo sheegeen in ay istaagtay wada hadalkii iyo gabi ahaanba xidhiidhkii qoraalka ee loo yaqaan [group network]. Is aaminaad la,aanta ayaa aad u badan, khaladaadka la sameeyeyna ma jiraan cid ka hadli karta waayo waxaaban jirin xidhiidhkii hore shir la isugu yimaadana ha sheegin.
Waxaanu xubnahaas weydiinay yaad u malaynaysaa in uu ka war hayo Jwxo-shiil meesha uu joogo, waxayna ku gaabsadeen laba xubnood ayaa laga yaabaa in ay ka warhayaan iyo xaaskiisa.
Waxaanu xuuraan u tagnay laba meelood oo aad na loogu ekaysiiyey in laga yaabo in uu joogo, Dubai iyo Eritaria. Dubai cid war ka haysa waanu waynay, waxaa kale oo aan tagnay guri na loogu sheegay in uu isagu lee yahay, balse aanu wax cadayna u weynay. Erteria waxaanu tagnay xer tababar oo ku taal Casab, oo na loogu sheegay in ay lahayd Jwxo, haatanse cidlo ah, marka laga reebo sodomeeyo ruux oo dhaawacyo bogsaday qaba iyo shan ruux oo maamul ahaan u jooga xerada oo kuligood ay xukuumada Eriteria noloshooda ka masuul tahay.
Waxaa kale oo aanu tagnay xero xaqooti oo ku taal Casab, oo ay ku jiraan qiyaastii 60 qoys oo isugu jira dad ka soo cararay Jamhuuriyada Somaliya iyo kuwo ka soo cararay dhulka Somalida Ogadeeniya. Dhamaantood waxay noo sheegeen in warkiisa ay ugu dambaysay dabayaaqadii bishii December 2008.
Hadaba, wixii intaasi ka dambaysa, waxaa la isticmaali karaa uun in warkii la ururiyey la falanqeeyo [anlayse]; Dr. Maxamed Siraad Dolal, waxaa la rumaysan yahay in uu dilay Jwxo-shiil, dadka qaar ayaa rumaysan in Jwxo-shiil iyo qaar ka mid ah Madaxda Itobiya uu xidhiidh ka dhaxeeyo. Waxay dadkaasi sababaysanayaan in malagu waa halkiisa laakiin Gabalka lagu dilay Dr. Dolal, uu joogay Jwxo-shiil oo aan waxba la yeelin Itobiyana ayna doonaynin in ay wax yeesho.
Hadiiba ayna xidhiidh lahayn, Jwxo-shill, waa nin da,a ah oo waliba xanuuno qabay, marka suurto gal marna ma aha in uu 5 bilood duur cidlo ah ku jiro, waxaana la filayaa in uu joogo meel magaalo ah oo ay sirdoonka Itobiya ku ogg yihiin, sidda na loo sheegay waxaa jiray xidhiidh waraaqo, waxaa kale oo jiray kulan ka dhacay Nairobi oo uu kula kulmay sirdoonka Itobiya.
Hadaba, sidda ay sheegayaan dadka isaga yaqaan, waxaa suurto gal ah in lagu balamay doorashada Itobiya ee dhici doonta 2010. Kolkaas uu u sheegi doono Jwxo-shiilada, oo uu ogg yahay in ayna go,aan qaadan karin in uu yimaado Itobiya ruuxi shaqo doonaya, ruuxii kalena uu danihiisa gaarka ah qabsado.
Waxaanu dhagaysanay cod Jwxo-shiil, June 15, 2009 [voice clips] laga siidaayey Ideecadii uu gaarka u lahaa ee RX2 oo bixi jirtay maalinta Jamcaha 30 daqiiqo, haatase baxda 3 daqiiqo, ayaa sii daysay cod hore oo baxay xiligii Da,uud Axmaar Xilka Kililka loo dhiibay.
Hadaba, waxay labo mid uun tahay, in uu joogo Itobiya oo uu heshiis ku joogo iyo in uusan noolayn oo aanay jirin cid ka war haysa, balse ayna jirin cid xaqiijin karta sida uu wax ugu dhacay.
Hadaba, sidda aanu ciwaanka ku sheegnay dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaanu u daynaynaa in ka soo Jawaabaan meesha uu joogo Jwxo-shiil, waa hadii ay jirto cid ka warhaysa meesha uu joogo.
Somalia: Ethiopian Troops Reach Near Beledweyn Town
Caaqilkii Cagaha Iska Gooyey “Midigeey Bidix Daa”